Olona roa naratra voadaroka: teratany vahiny iray maty voatifitra | NewsMada
Olona roa naratra voadaroka: teratany vahiny iray maty voatifitra
Notafihin’ny jiolahy efa-dahy nirongo fiadiana, ny alin’ny zoma hifoha ny asabotsy teo, ny trano fonenan’ity teratany vahiny iray, ao Analamboanio, Toamasina. Maty vokatry ny tifitra nahazo azy ity farany. Voaroba avokoa ny fananana tao an-tranony.
Sesilany ny tsy fandriampahalemana ao amin’ny faritra Atsinanana, indrindra amin’izao ankatoky ny fetin’ny Krismasy sy ny famaranana ny taona izao. Mirongatra izaitsizy ny asan-jiolahy mitam-piadiana mahery vaika. Ny alin’ny zoma hifoha asabotsy 22 desambra 2018 teo, fanafihana telo samy hafa no niseho tamin’iny RN 5 iny ka nahafatesana teratany vahiny iray ny iray amin’ireo raha naharatrana olona efatra hafa kosa ny fanafihana roa hafa. Ho an’ny tao Analamboanio Toamasina, tsy lavitra ny trano fandraisam-bahiny lehibe iray, indray nanafika trano fonenana teratany vahiny iray ny jiolahy efa-dahy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika ka maty voatifitr’ireo jiolahy ilay vazaha raim-pianakaviana tao amin’ilay tokantrano. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, niharan’ny tifitra nataon’ireo jiolahy ity farany. Nanjaka tanteraka ireo jiolahy nandritra ny fanafihana satria noraofin-dry zalahy ny entana rehetra tao an-tranony. Lasa nitsoaka avy hatrany kosa izy ireo rehefa nahazo izay nilainy tao an-tranon’ilay teratany vahiny.
Lasan’ny jiolahy koa ny volana letisia…
Fanafihana faharoa kosa, teo Ivoloina, 6 km miala an’i Toamasina amin’iny RN 5 iny ihany. Olona roa mpivady avy nivarotra vokatra letisia tany Toamasina no efa nandrasan’ireo jiolahy teo amin’ny fialana taksiborosy ary narahin’izy ireo avy ao aoriana. Teo amin’ny toerana somary maizimaizina no novelesin’ireo jiolahy ny hazobe ny lohan’ilay raim-pianakaviana ka nianjera avy hatrany izy. Norahonan’ireo jiolahy ilay ramatoa vadiny mba hanome ny vola vidim-bokatra, saingy namaly izy ka nodarohin’ireo olon-dratsy. Lasan’ireo mpanafika ny vola, ilay renim-pianakaviana kosa, torana tsy nahatsiaro tena. Olona sendra nandalo no nitondra azy mivady teny amin’ny Hopitalibe Toamasina. Na eo aza ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana, tsy kely lalana hatrany ny jiolahy.